Malag@sy Miray | Ohabolana	News FeedComments · FAQ	| Blogosphère malag@sy 100% collectif	Accueil
Browse > Home / Archive by category 'Culturel / Ohabolana'
Filed under Actualités, Blogging, Développement, Identité, Langue (Fr), Langue (Mg), Ohabolana, Politique, Société | No Tags
vers une numérisation excessive de la société urbaine	20 septembre 2011 by Mitiyu 1 Comment La vie dans les villes est, semble-t-il, plus enrichissante qu’ailleurs. On peut s’enrichir financièrement qu’intellectuellement. Un peu moins moralement, certes et on peut aussi beaucoup perdre. Quoiqu’il en soit, l’écrémage de la ville sur les autres localités a toujours montré les nouveautés et les tendances.
Filed under Actualités, Blogging, Communauté, Développement, Langue (Fr), Médias, Ohabolana, Société | No Tags
Izay mahavangivangy tian-kavana	15 juin 2011 by Mitiyu Leave a Comment Amin’izao fahatongavan’ny fety izao dia tsara ny mampahatsiahy ireo fomba nahatsara fiahavanana teo aloha. Marina fa efa tonga eto Madagasikara ny fanatontoloana sy ny lafiny tsara sy ratsy saingy tsara raha tazonina ihany koa ireo fomba nahafinaritra teo aloha. Anisan’ny zavatra nahafinaritra ny fahavanana sy ny firaisan-kina nisy teo amin’ny malagasy. Efa mahazatra ny maheno izany. Saingy tsara tsiahivina ihany koa ny fifandraisan’ireo mpianakavy na ireo miray fihavanana ka nahatonga ny ohabolana maro teo aloha toy ny hoe « Asa vadi-drano, tsy vita raha tsy ifanankohonana » na ihany koa ny « tanan-kavia sy havanana ka izay didi-maharary ».
Filed under Blogging, Communauté, Culturel, Développement, Identité, Langue (Mg), Ohabolana, Société | No Tags
hevitra sendra nandalo	7 juin 2010 by Mitiyu Leave a Comment Nalefa tamin’ny haino aman-jerimpanjakana tamin’ny faran’ny herinandro teo ny fanombohana ara-pomba ofisialy ny faha-50 taona nahazoan’ny malagasy ny fahaleovan-tena. Hita sy tsapa fa natao am-pahamehana ihany raha ny zavatra hita sy re tamin’izay nitranga teny Andohalo. Ny voalohany aloha dia somary gaga avokoa ireo namadibakika onjam-peo raha nahita seho nitranga mivantana nalefa tamin’ny fahitalavitra sy ny vata fandraisam-peo. Dia samy nifampanontany hoe inona io? fa misy inona? Raha tsy nihaino ny kabary dia tsy fantatra hoe fanombohan’ny fankalazana ny faha-50 taona nahazoan’ny malagasy fahaleovan-tena. Tsy ampy na ihany koa tsy nisy mihitsy ny serasera momba iny hetsika iny. Mety hoe matahotra ho takon’ny ady baolina kitra goavana izay mitranga atsy Afrika Atsimo angaha dia tsy maintsy natao na ihany koa mety efa tara nefa tsy maintsy hatao dia nalefa? asa aloha, tsy misy mahafantatra isika. Ny faharoa dia ny fahazakan’ny herinaratra ny zava-maneno sy ny entana mila izany tamin’io fotoana io. Tsy nifampiresahana tamin’ny JIRAMA mialoha sa sendra ny erikerika tsy nampoizina ka nampisy olana teknika? sa kosa tsy nisy teny nifampiarana tamin’ny tompon’andraikitry ny fanamisam-peo sy ny haingon-jiro isankarazany fa notampohina? asa koa aloha fa ny zavatra hita tsy dia lavorary no fantatra. Izany ve no fanajana izany fahatsiarovana ny nahazoana ny fahaleovantena izany, koa tsy hihomehezan’ny taranak’ireo izay nanome izany hoe rariny raha tokony mbola tsy nomena sanatria? Dia malahelo sy menatra ny tena…
Ny farany azo ambara mba tsy hanaovana fanakianana be fahatany tsy mampandroso dia ny sary famantarana. Tsara raha jerena amin’ny lafiny teknika izy ity saingy dia somary gaga ihany satria ny sary voalohany tonga an-tsaina raha vao mijery azy dia sarina foza… Tsy dia ilay fozaorana nalaza volana maromaro tsy akory soa ihany satria dia efa lasa resaka politika no niafaran’ito biby iray ito. Fa drakaka izany mba hanazava azy bebe kokoa. Ny fahafantarana ny foza dia biby tsy mandeha mahitsy (droiture), kaodikaody ny maso, manongo sy miketoka be fahatany, ary ny sasany moa dia tsy miaina raha tsy amin’ny toerana maloto… enga anie ka tsy nanana izany hevitra izany ny mpikanto tamin’ny nanaovany izany. Roa tokom-bolana sisa dia tonga ny fety, mbola afaka miketrika tsara hahandro hahamasaka izay lanonana hatokana ho an’ny vahoaka sy ny manam-boninahitra ny mpikarakara. Omano tsara hisorohana ny tsy ampoizina sy mba hilanona tsara ny malagasy tsy vaky volo.
Filed under Actualités, Blogging, Identité, Langue (Mg), Ohabolana, Politique | No Tags
Mbola afaka hirehareha aho fa Malagasy	28 avril 2010 by Mitiyu 5 Comments Andrianiko, hono, ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko. Dimampolo taona izao no voalaza fa niverina ny fiandrianam-pirenena Malagasy. Tao anatin’ny taona vitsivitsy lasa dia hita sy tsapa fa misy ireo mpiray tanindrazana no mieritreritra fa ambony sy tafita rehefa miresaka amin’ny teny vahiny. Maro ny mibadabada amin’ny teny frantsay, etsy andaniny ireo tsy mivolana raha tsy amin’ny teny anglisy ary ampahany vitsivitsy no miresaka amin’ny teny alemà sy sinoa. Ny zanaka nentin’ireo mpianatra tamin’ny fiandohan’ny repoblika faharoa etsy andaniny dia mahay teny rosianina. Nosy i Madagasikara ary isaorana an’Andriamanitra isika mbola tsy niady sisin-tany firy tamin’ny firenena hafa na dia misy ihany aza ireo nosy kely vitsivitsy tokony ho an’I Madagasikara nefa bodoin’ny firenena hafa.
Ary dia mbola afaka mirehareha ny maha-malagasy ahy aho noho izay teniko izay. Teny miavaka sy tokana, ahafana mifanerasera tsara, ary ravahan’ireo fitenim-paritra maro loko. Mbola tsy nahita aho tamin’ny fety maro izay natrehiko ka ireo olona miezaka ny manao fitafy Malagasy dia misalaka sy misikina fotsiny ihany. Indrisy fa na dia filatro nentin-drazana aza no tiana atao dia irony pataloha sy palitao tandrefana irony no isalorana lamba (landy) dia izay. Misy ihany moa ireo olona vitsivitsy no misatro-bory na miambozona firavaka nentin-drazana. Saingy takona izy ireny ka haingo ivelany sisa no hita. Tsy mba tena nisy ireo niezaka namoaka fitafy miavaka sy tena Malagasy azo oharina amin’ny ny an’ireo indianina vavy miankanjo saari na ireo afrikana maro manao boubou, na ireo japoney manao kimono, na ireo sinoa manao ifu. Naleontsika nitady nivery ka manafangarongaro endrika, dia ny vary sy ny tsiparifary. Ka ny soga sy ny landibe aravaka tandrok’omby no hankalazaina fa tena fitafy nentin-drazana. Saingy mbola afaka mirehareha ny maha-malagasy ahy aho noho ireo tanora vitsivitsy ireo, mikaroka sy mitady ny very ka mampifangaro ny soga sy ny landy ary ny landibe mba ho filatro mihaja sy miavaka ka ho tonga fitafy nentin-drazana ho an’ireo zanaka amam-para any aoriana.
Tonga ireo vahiny sasany dia namokatra ireny akanjo lazainy fa avy amin’ny tena Malagasy. Ao ireo misarin’omby, ombalahy sy tarondro. Ao ihany koa ireo misarisarin-tsokatra sy lefona ary koa taksi-borosy. Ny an’ny sasany moa dia nampiany lakam-bezo sy Atandroy lahy mandihy. Misy ampahany aza misy sarin-toaka malaza. Dia izay no nahafantarana fa nandalo teto gasikara ilay vahiny iray ka lasa voan-dàlana ilay endrika tsy tena avy eto an-toerana fa kolotsaina sadasada nafangaro ny zava-misy.
Saingy na mampahatsiahy ahy ranomaso sy alahelo aza ireto aloalo aravaka ny akanjo, dia mbola afaka aho ny hirehareha fa manana ireo amin’ny kisarisary maro ireo ka tsy amin’ny akanjo fotsiny ihany no ahitana azy ireny fa manerana ny fireneko. Nisy fotoana ireo ankizy sy tanora, tsy tia mozika afa-tsy rôka na rap ary tsy nandihy raha tsy dihy vahiny. Kanefa adinony fa mbola misy ireo mpandala ny jijy, ny beko na koa ny sôva, ary mbola maro ireo mpanao asa apinga, ny mpilatsy tàanana ary ny mpandihy soroka no miezaka manavao ireto kolontsain-drazana mba haharaka ny toetr’andro. Ka na ny kabôsy na ny sodina na ny valiha dia tsy tena malagasy fotsiny no niandohany. Indrisy anefa fa mampalahelo fa misy ireo tanora no mihevitra fa ny dihy mampihetsika fitombenana no tena dihy malagasy ka adinony tanteraka fa lovan’ny moron-tsiraka tamin’ny firenena afrikana ireny. Fa na dia izany aza ny zava-misy dia mbola afaka ny hirehareha aho fa Malagasy noho ireo harena ara-kolotsaina marobe misy eto amin’ny firenena sy ananan’I Gasikara ka tsy maha-mena-mitahy ireo mpandala ny kanto malagasy hiatrika ny sehatra iraisam-pirenena fa afaka mitondra tsara izany hifaninana amin’ny ny an’ireo firenena hafa. Repoblika telo no nifanesy. Isaky ny mitady hitraka ilay fireneko dia misy foana ireo miezaka ny mandetika azy. Tsy azo lazaina izy ireny fa hoe tena tia tanindrazana fa toa saribakoly tia seza sy mitady voninahitra fotsiny ihany. Ka ny harena kely ananany sy ny fahefana azony ao no entina manosihosy ireo mpiray tanindrazana sy entina misolelaka amin’ny firenen-dehibe hafa. Saingy mbola faly aho hatramin’izao mahatsiahy fa ao anaty ràko ao, misy ny ràn’ireo mpanjaka razambe, namolavola sy niady mafy ny mba hanandratana ny fireneny sy ny vahoakany. Ka nametraka fefiloha mba tsy hahatondraka ny tanàna, nitondra amim-pahendrena ho tombon-tsoan’ny tsirairay. Ka ireo ratsiratsy saina sy nanana fiheveran-dratsy dia novonoina sy nokendaina tamin’ny lamba mba ho ohatra ho an’ny ho avy.
Filed under Blogging, Développement, Identité, Langue (Fr), Langue (Mg), Ohabolana, Témoignages | kolotsaina malagasy
Dia inona ary izany no mahamalagasy anao?	16 février 2010 by Mitiyu 5 Comments « Tsarovy sy mba tadidio… malagasy anie ianao ô »
Raha ny ara-kolotsaina sy ny soatoavina no resahina dia mora ny fanehoan-kevitra satria tsy mila mitady lavitra akory dia mahita izay azo raisina ho maha-malagasy. Ny riba sy ny hasina malagasy no voalohany tonga ao an-tsaina raha kolotsaina no resahina. Ary ny fihavanana sy ny firaisan-kina kosa raha ny soatoavina no fakafakana. Ito lafiny iray ito no tena nahindrahindra sy mbola sahanin’ny ministera voakasika hatramin’izay ka hatramin’izao. Maro ihany koa ny afaka tanisaina raha ny vakoka sy ny kolotsaina no ambara. Indraindray aza toa lasa kisary sisa fa tsy dia iainana intsony. Iza marina moa no tsy mahalala izany vako-drazana, hira gasy, famorana, famadihana, sambatra, hazolahy, sns. Eto dia manahirana ny miresaka fivavahana malagasy satria hatramin’ny fidiran’ny fivavahana kristianina dia niova ny fandraisana ny fivavahana malagasy. Tsy eo intsony ireo toko telo misahana ny razana sy ny zanahary, lasa fady ny mamadika sy manao joro noho ny finoana tsy mitovy ary mampisaraka indraindray ny resaka firazanana.
Raha ny fisainana sy ny fiteny dia somary miharatsy ny fitsarana ny maha-malagasy. Antony mahatonga izany ohatra ho an’ny antokon’olona vitsivitsy dia rehefa mahay fiteny vahiny ianao dia ambony fa raha malagasy mandala ny fiteniny dia toa misy manambany. Very ihany koa ireo fisainana niaraka tamin’ny ohabolana nolovaina tamin’ireo razana. Hany ka ankehitriny dia aleo very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola, ary toa lasa trano atsimo sy avaratra ka aleo samy manana ny azy. Indrisy, samy maka ho olon-ko azy ny fiaraha-monina ankehitriny. Ny tanora moa dia lasa manao fiteny malagasy kiringa ka manafangaro ny vary sy ny tsiparafara. Ny « tu vois » sy ny « tu sais » lasa mialoha ny fehezan-teny malagasy. Eto amin’ny resaka fitafy sy fihetsika dia ahafahana mivalapatra tsara satria mampiady hevitra ny rehetra. Nanatrika ny hetsika « Takariva malagasy » ny tena ary voalaza tao anaty fanasana fa fitafy malagasy no tsara raha hisalorana. Vahotra ny saina satria salaka sy sikina no tao an-doha nefa ilay lanona handeha mivantana amin’ny fahitalavitra. Sao dia sanatria hamoha fady eo ny fiakanjon’ny tena? Hany hery nitafy lamba arindrano misy satrok’andrina vita amin’ny kofehy miloko ranom-bolamena. Misy namana somary malaza izay aza moa dia koba no nasolo ny mofo mamy nahazatra tamin’ny fampakaram-bady, nahafinaritra. Ny an’ny tena dia nijanona tamin’ny fiantsoana mpanao vako-drazana izay namela tsiahy ratsy satria dia nahatorana ny fofon’ny vitsivitsy tamin’izy ireo. Ho ahy manokana dia tsy tiako sy tsy ankasitrahiko ny misalotra na miambozona aloalo satria dia toy ny mitondra alahelo sy tomany noho izy ireny fametraka eny amin’ny fasana. Mivoatra isan’andro ny fitafy malagasy ary tsy ifanomezan-tsiny raha mbola ny landy sy ny landibe ary ny soga fotsiny aloha no tena ahafahana mampiavaka azy io ankehitriny. Ho ahy ny maha-malagasy dia miankina amin’ny ao am-po, ny fanahy mitaiza sy mitahiry ireo fahendrena izay efa nisy teo aloha ary ny indrindra ny saina. Anjaranao no mahita ny anao, fa mbola hiverina amin’ny vanim-potoana mbola hitady ny very indray aloha isika malagasy vao hahafantatra sy hahalala ary hahay ny maha-malagasy antsika. hasina, hira gasy, riba, soatoavina malagasy, vakodrazana, vakoka
Filed under Culturel, Développement, Identité, Ohabolana, Société | hasina, hira gasy, riba, soatoavina malagasy, vakodrazana, vakoka
Ny tena fitiavan-tanindrazana	3 novembre 2009 by Mitiyu Leave a Comment Mbola misy ve ireo malagasy tena tia tanindrazana ? Mipetraka ny fanontaniana.
Tao anatin’izay dimampolo taona farany taorian’ny nahazoana ny fahaleovan-tena mantsy dia mampisalasala ihany ny mamaly io fanontaniana io. Mbola afaka valiana tsara ihany izy io saingy tao anatin’ny herintaona izao dia tsy hita mazava izay valinteny tena marina.
Maro ireo mitonona ho tia tanindrazana saingy ny fihetsika sy ny fomba rehetra dia toa maneho fa fitiavam-bola sy voninahitra ary seza eo amin’ny fitondrana no betsaka. Misy ireo mimenomenoma amin’ny tena tokony atao sy tokony ho fomba fiaraha-monina fa tsy mihetsika tsy manao na inona na inona afa-tsy ny fitadiavana mahazatra mba ivelomana.
Vonona ve ianao ho faty ho tombontsoan’ny vahoaka malagasy sy fihavaozan’ny firenena ? Vonona ve ianao hanasoa ny tanindrazanao tsy hangataka tambiny na karama ary tsy ho noho ny tombontsoa manokana ? Vonona ve ianao hijoro manoloana ny jadona ankolaka ataon’ireo firenen-dehibe vitsivitsy mikatsaka ny mahasoa azy eto Madagasikara ka mitady amin’ny fomba rehetra hametsena sy hanambaniana anao ? VONONA VE IANAO HIASA AMIN’NY FONAO MANONTOLO KA TSY HIKELY SOROKA MBA HANATSARANA NY TONTOLO MANODIDINA ANAO ?
Namaly TSIA indray, in-droa, in-telo ve ianao tamin’ireo faontaniana teo ambony ireo ? Mbola tsy tena vonona ny haneho ny mety ho tena fitiavanao ny taindrazanao ianao izany.
Mba inona kosa ary izany ny anjara biriky nentinao ho fanarenana na fanasoavana ny tanindrazanao ? Maro mantsy ireo olona tafaresaka amin’ny tena no milaza fa vonona hanasoa ny ankohonany sy ny fianakaviana fa hatreo ihany satria tsy misy antenaina, hono, ny firenena.
Aza manao fitiavan-tanindrazan’ny taona roa arivo ka mitombo arakaraka ny vola voaray !!!
Filed under Identité, Langue (Mg), Ohabolana, Politique, Société | fitiavan tanindrazana